ထူးခြားတဲ့ သြဂုတ်လ (၃၁) ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်များ – Askstyle
ထူးခြားတဲ့ သြဂုတ်လ (၃၁) ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်များ
ပရိတ်သတ်ကြီး ထူးခြားလှတဲ့ သြဂုတ်လ (၃၁) လို့ ပြောရမှာပဲနော်။ ဒီနေ့လေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး စပြောရရင်တော့ ပရဟိတ မင်းသားကြီး ဦးကျော်သူပါပဲ။ ဒီနေ့လေးဟာ သရုပ်ဆောင်/ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်သူ နဲ့ ဇနီး မြင့်မြင့်ခင်ဖေ(ရွှေဇီးကွက်) တို့ ဇနီးမောင်နှံ့ရဲ့ (၃၈) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်လေးပါနော်။ ဦးကျော်သူတို့ ဒီထက်မက ချစ်ခင်ကြင်နာကြပြီး၊ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ အများကြီးလုပ်နိုင်ပါစေနော်။
နောက်တစ်ယောက် ဘယ်သူများ ဖြစ်မယ်ထင်သလဲ ပရိတ်သတ်ကြီး ………။ သူကတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်တဲ့ မကြီးစိုး စိုးမြတ်သူဇာ ပါပဲ။ မင်းသမီးကြီး တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ အမြဲတမ်း ပြုံးရွှင်နေပြီး ချစ်စရာ အမှုအရာတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်သူပါပဲ။
အခု နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဟာသ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် …. ဘယ်သူဖြစ်မယ်ထင်လဲ …….။ လူကောင်သေးသေးလေးနဲ့ ဟာသတွေ တအားပြောတဲ့ မဂွမ်းပါ။ ဒီနေ့ဟာ ချစ်စရာ အမှုအရာလေးတွေကြောင့် ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ အသဲစွဲဖြစ်နေရတဲ့ သရုပ်ဆောင် တက္ကသိုလ် ဂွမ်းပုံရဲ့ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆုတောင်းပေးကြဦးနော် ပရိတ်သတ်ကြီး။
နောက်ဆုံးတစ်ယောက် ဘယ်သူလဲဆိုတော့က ………။ အားလုံးက ချစ်တဲ့ အဆိုတော် ဒေါက်တာလေးပါ။ အသံပါဝါကောင်းလွန်းလို့ နိုင်ငံခြားက လူတွေတောင် လေးစားရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေကို ပိုင်နိုင်စွာ ဆိုနိုင်ပြီး၊ လက်ရှိ ဂီတလောက အကောင်းဆုံးသော နေရာတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ……….. အဆိုတော် နီနီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာ သူမရဲ့ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဦးကျော်သူတို့ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့လည်းရယ်။ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မကြီးစိုး၊ မဂွမ်း၊ နီနီတို့ရဲ့ မွေးနေ့လေးကို ဝိုင်းပြီး ဆုတောင်းပေးကြရအောင်။ ဒီထက်မက အောင်မြင်ကြပြီး၊ ထာဝရပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။
ပရိတျသတျကွီး ထူးခွားလှတဲ့ သွဂုတျလ (၃၁) လို့ ပွောရမှာပဲနျော။ ဒီနလေ့ေးမှာ မွနျမာနိုငျငံမှာ ရှိတဲ့ နာမညျကွီး အနုပညာရှငျမြားရဲ့ နထေူ့းနမွေ့တျလေးတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ ပထမဦးဆုံး စပွောရရငျတော့ ပရဟိတ မငျးသားကွီး ဦးကြျောသူပါပဲ။ ဒီနလေ့ေးဟာ သရုပျဆောငျ/ဒါရိုကျတာ ဦးကြျောသူ နဲ့ ဇနီး မွငျ့မွငျ့ခငျဖေ(ရှဇေီးကှကျ) တို့ ဇနီးမောငျနှံ့ရဲ့ (၃၈) နှဈပွညျ့ နှဈပတျလညျလေးပါနျော။ ဦးကြျောသူတို့ ဒီထကျမက ခဈြခငျကွငျနာကွပွီး၊ ပရဟိတ လုပျငနျးတှေ အမြားကွီးလုပျနိုငျပါစနေျော။
နောကျတဈယောကျ ဘယျသူမြား ဖွဈမယျထငျသလဲ ပရိတျသတျကွီး ………။ သူကတော့ ပရိတျသတျကွီးရဲ့ ခဈြစနိုးနဲ့ ချေါတဲ့ မကွီးစိုး စိုးမွတျသူဇာ ပါပဲ။ မငျးသမီးကွီး တဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျနပေါတယျ။ အမွဲတမျး ပွုံးရှငျနပွေီး ခဈြစရာ အမှုအရာတှနေဲ့ ပရိတျသတျကွီးကို ဆှဲဆောငျထားနိုငျသူပါပဲ။
အခု နောကျတဈယောကျကတော့ ဟာသ သရုပျဆောငျတဈယောကျ …. ဘယျသူဖွဈမယျထငျလဲ …….။ လူကောငျသေးသေးလေးနဲ့ ဟာသတှေ တအားပွောတဲ့ မဂှမျးပါ။ ဒီနဟေ့ာ ခဈြစရာ အမှုအရာလေးတှကွေောငျ့ ပရိတျသတျကွီးရဲ့ အသဲစှဲဖွဈနရေတဲ့ သရုပျဆောငျ တက်ကသိုလျ ဂှမျးပုံရဲ့ မှေးနလေ့ေးဖွဈပါတယျ။ ဆုတောငျးပေးကွဦးနျော ပရိတျသတျကွီး။
နောကျဆုံးတဈယောကျ ဘယျသူလဲဆိုတော့က ………။ အားလုံးက ခဈြတဲ့ အဆိုတျော ဒေါကျတာလေးပါ။ အသံပါဝါကောငျးလှနျးလို့ နိုငျငံခွားက လူတှတေောငျ လေးစားရတဲ့ သူတဈယောကျဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ အင်ျဂလိပျသီခငျြးတှကေို ပိုငျနိုငျစှာ ဆိုနိုငျပွီး၊ လကျရှိ ဂီတလောက အကောငျးဆုံးသော နရောတဈခုကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ……….. အဆိုတျော နီနီဖွဈပါတယျ။ ဒီနဟေ့ာ သူမရဲ့ မှေးနလေ့ေးဖွဈပါတယျ။
ကဲ ပရိတျသတျကွီးရေ ဦးကြျောသူတို့ရဲ့ နှဈပတျလညျနလေ့ညျးရယျ။ ပရိတျသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော မကွီးစိုး၊ မဂှမျး၊ နီနီတို့ရဲ့ မှေးနလေ့ေးကို ဝိုငျးပွီး ဆုတောငျးပေးကွရအောငျ။ ဒီထကျမက အောငျမွငျကွပွီး၊ ထာဝရပြျောရှငျကွပါစနေျော။